I-P2 encinci yePikitch Pitch Ukubonisa okungaphakathi kwe-LED kwiiNkomfa
Iqonga elingaphakathi, istudiyo seTV, ikonsathi, ipaki yomxholo, ukuSebenza kweNqanaba, iminyhadala ebukhoma, i-Dj booth yeeklabhu zasebusuku, iikonsathi, imithendeleko, iminyhadala, iifestile zevenkile okanye imiboniso, inkomfa, inqanaba lasemva kweqonga kunye nezinye iindawo zentengiso kunye neenjongo zokuzonwabisa.
1. Ukuhlaziya okuphezulu kunokufikelela kwi-3840HZ. Ngowona mgangatho mhle we-IC, inokubonisa iziphumo ezibonakalayo ezigqibeleleyo.
2. Akukho sidingo sokususa icala elingasemva lepaneli yokutshintsha imodyuli ekhokelwayo.
3. Ikhabhathi yokuphosa iAluminiyam yenza ikhabhathi enye ukuba ikhanye njenge-8KG.
4. Iimaski eziyilwe ngokukodwa zinokwenza i-engile yokujonga ethe tyaba ukuya kuthi ga kwiidigri ezili-140.
5.500mmx500mm kunye ne-500mmx500x1000mm inokuxuba usetyenziso, ekulungeleyo ukuba uyisebenzise kwimisitho eyahlukeneyo.
6. Ukudityaniswa kokuqaqamba okulungisa ngokuzenzekelayo iteknoloji kunye namandla ombane wePFC, amandla asezantsi asezantsi angasindisa amandla ngaphezulu kwe-35%, oko kuthetha ukonga imali engama-35%.
Ngobuchwephesha bokubonisa i-LED kunye neemfuno zentengiso yokubonisa zihlala zikhula, ipikseli encinci yeP2mm yokubonisa ngaphakathi kwe-LED ngoku iyathandwa kakhulu. Okwangoku ukubonakaliswa kwe-P2 kwangaphakathi kwe-LED kukubonisa okuncinci kweepikseli ukubonisa i-LED kwimarike yokubonisa engaphakathi. I-P2mm yangaphakathi ye-SMD yokubonisa i-LED yenzelwe inkcazo ephezulu kunye nokusetyenziswa okuphezulu apho isikrini kufuneka sibonise umfanekiso ocacileyo kunye nevidiyo kubaphulaphuli, kunye neempawu zoxinaniso oluphezulu ngeemitha zesikwere kunye nomgca we-2.0mm kunye nokushiyana kwekholamu, P2 Ukuboniswa okungagungqiyo kwe-LED kukukhetha kuqala ukuba ngaba umgangatho wevidiyo we-HD uyafuneka kwizicelo zangaphakathi. kwaye isetyenziswa ngokubanzi kumagumbi enkomfa, amagumbi okubek'esweni, amagumbi olawulo, okanye nayiphi na indawo apho ukwahluka okuphezulu, ukujonga kufutshane kuyadingeka.
Kule minyaka idlulileyo, i-Pin nganye ye-P2 yangaphakathi ekhokelwe kwiscreen sokubonisa ekhompyutheni iza ngaphambili kwaye ilawule imarike yokubonisa ye-LED ngokuxhomekeke kubungakanani obuchanekileyo, ukuchaneka okuphezulu, ukuthembeka okuphezulu, uzinzo oluphezulu kunye nokubonakalayo okuhle kakhulu kumava.
ngolawulo olungqongqo lwemveliso kunye nezinto ezikumgangatho ophezulu ze-LED, uphawu lwethu lwe-P2mm ye-LED inokubonelela ngesisombululo esiphakamileyo sokubonisa isisombululo se-HD, esibonelela ngokubonakalayo kunye nokubonakalayo okucacileyo. kunye nokunye, umgangatho ophezulu omnyama we-SMD2020 LED ukuqinisekisa ukuba i-P2mm yethu yangaphakathi yesikrini se-LED sinokulinganisela okumhlophe nakwiindawo ezingaphandle. Ngaphandle koko, uyilo lwekhabhinethi yobungcali kunye noyilo lwamandla olusebenzayo ukwenza uphawu lwethu lwe-P2 lwangaphakathi lwe-LED luyingqayizivele, luzinzile kwaye luzolile. Ukongeza, inkqubo ekhokelayo yokubonisa i-LED isetyenziselwa ukwenza i-Pledoled P2mm yangaphakathi yesikrini se-LED ukusebenza ngokulula kunye nomsebenzi wolawulo lomxholo onamandla. Ngaphandle koko, iiprojekthi ezahlukeneyo ezikhulileyo zangaphandle ziphucule i-P2 ye-LED ukubonisa ukusebenza kwayo yonke kwaye ngakumbi nangakumbi ngokwezifiso sikhetha njengexesha elide P2 umthengisi wezandla ze-LED kunye nomboneleli. Kuluzuko lwethu, kwaye sisisikhuthazo kuthi, siya kuthi, njengesiqhelo, kubo bonke abathengi abatsha nabadala abanemigangatho encinci yeepikseli ze-P2 zangaphakathi iimveliso zokubonisa kunye neenkonzo.
wamkelekile ukuba ufunde okungakumbi malunga ne-P2 yangaphakathi yokubonisa i-LED
Amandla enkampani yethu.
Njengeshishini lobuchwephesha obuphezulu elidityaniswe nophando lwenzululwazi, uyilo, imveliso, ulondolozo, ukuthengisa kunye nokudityaniswa kwenkqubo, iShenzhen I-Oneinled Optoelectronics Co Ltd ikhethekileyo kwiscreen sokubonisa se-LED. Sineqela lobuchwephesha be-R & D lobuchwephesha obuzibandakanya kwi-R & D yeemveliso zetekhnoloji ephezulu iminyaka kunye namandla oqinileyo obuchwephesha. Sikwanazo iinjineli ezininzi ezinamava kunye nophuhliso lwemveliso yobunjineli kunye neenjineli zoyilo. Ngezixhobo zemveliso eziphambili kunye nezixhobo zovavanyo kunye neqela lokuthengisa kunye neqela elisebenzisanayo, silawula ukwandiswa kwemarike kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa ngendlela iyonke.
1) Uqeqesho emva komyalelo
Emva kokuba kwenziwe i-odolo, kuya kwenziwa uqeqesho lwenkqubo, kubandakanya ukusetyenziswa kwesoftware, ukusebenzisa ukhuseleko, ukugcina izixhobo
2) Ukufakwa kunye nokulungisa ingxaki
Singathumela iingcali ukuba ziqhube kufakelo lwesiza kunye nokulungisa amaphutha ngokungqinelana neemfuno zezikim kunye nencwadana yemigaqo.
Iwaranti: iminyaka emi-3 iwaranti, ulondolozo lobomi bonke
Xhobisa kunye nezahlulo ezisimahla. Iminyaka emi-2 yokuqala emva kokuthunyelwa, siya kuba noxanduva lokugcina simahla ukuba kukho nayiphi na ingxaki ebangelwe ngumgangatho ngokwawo. Ngelixa kuya kufuneka uthathe iindleko zomthwalo kuthi. Emva kweminyaka emi-2, inkonzo isekhona, kodwa ingabiza imali yabasebenzi, izinto ezibonakalayo kunye neendleko zothutho ezivelisayo.
Imigaqo yolondolozo: impendulo ngexesha, sombulula iingxaki ngokukhawuleza kwaye uqinisekise ukusetyenziswa.
Ixesha lokulondolozwa: Ngexesha lokugcinwa komzimba obonakalisiweyo okhokelwayo, simahla kuzo zonke iirhafu zolondolozo
Emva kwexesha lolondolozo, kubiza kuphela iindleko eziphathekayo kunye neendleko zabasebenzi.